विश्वभर कोरोना खोपको लहर : के हो भाइरसविरुद्धको खोप ? – KhojPatrika
खोज पत्रिका आइतवार, २०७७ माघ ११, ११ :१७ बजे
काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरूप यतिबेला विश्वभरि समुदाय स्तरमा खोप लगाउन थालिएको छ । खोपको प्रभावकारिता, असर र प्रयोगको उपयोगिता बारे विभिन्न कोणबाट बहस समेत भइरहेको छ । आखिर खोप के हो ? यसले कसरी रोकसँग लड्ने क्षमता विकास गर्छ त ? केही तथ्य यस्ता छन् ।
खोप लगाउदा कति सुरक्षित ?
जोखिमहरू पनि हुन्छन् तर सबै औषधिहरू जस्तै जोखिमको तुलनामा खोपको लाभ निकै धेरै हुन्छ । करोडौँ मानिसको ज्यान लिएको बिफर अहिले खोपकै कारण पूर्ण रूपमा निर्मूल भइसकेको छ । विश्वव्यापी खोप अभियान सुरु भएको करिब ३० वर्षपछि अफ्रिकाले गत अगस्ट महिनामा मात्र पोलियोमुक्त घोषणा गर्यो। एउटा अभियान पुरा गर्न भने प्रकोप र रोगको अवस्था हेरेर केही समय लाग्नसक्छ । सामान्य अवस्थामा पुग्ने गरी कोभिड–१९ विरुद्ध विश्वभरिको जनसङ्ख्यालाई खोप दिन महिनौँ वा सम्भवतः केही वर्ष लाग्न सक्छ ।
ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्यारासाइट वा फङ्गसजस्ता रोगका कारक शरीरभित्र प्रवेश गरेपछि शरीरले त्योसँग लड्न एन्टीबडी उत्पादन गर्न थाल्छ । परम्परागत खोपले दैनिक क्रियाकलापमा किटाणुहरूसँग लड्नुअघि एन्टीजेनको कमजोर वा निष्क्रिय अंश मानिसको शरीरमा उत्पादन गरेर सहयोग गर्ने गर्दछ । प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वास्तविक किटाणुसँग लडेको जस्तो कार्य गर्न खोप उपयोगी हुन्छ । फाइजर–बायोएनटेक र मोडेर्ना दुवै भाइरसको आनुवंशिक सङ्केतको रूपमा प्रयोग हुने म्यासेन्जर आरएनए –एम–आरएनए खोप हुन् ।
कमजोर वा निष्क्रिय एन्टीजेनलाई प्रयोग गर्नुको बदला यी खोपले एन्टीबडी बनाउन आवश्यक पर्ने प्रतिरोधी क्षमता सक्रिय तुल्याउन कोभिड–१९ को भाइरसको सतहमा भेटिने प्रोटिन तीव्र वृद्धि गराउँछ । अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका खोप भने अलिक फरक छन् । यही खोप नेपालमा भारतको सहयोगले आइपुगेको छ । वैज्ञानिकहरूले चिम्पान्जीहरूलाई सङ्क्रमित गर्ने सामान्य रुघाको भाइरसलाई परिवर्तन र कोभिड–१९ को अनुवांशिक सङ्केतका अंशलाई थप गरेर कोरोना विरुघको खोप विकास गरेका छन् ।
खोप क–कस्लाई लगाउने ?
ट्याग : #खोप लगाउन, #विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन